सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकामा कांग्रेसको घिन लाग्दो राजनीति – मिलिजुली खबर
यो संकटको बेला सबै मिलेर आफ्नो क्षेत्रमा कोरोना भाईरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्ने हो । तर सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकामा भने नेपाली कांग्रेसले अनावश्यक बखेडा सिर्जना गरेर संकटमा राजनीति गर्न खोजेको छ ।
यस्तो घिन लाग्दो राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रिय सभापति बाल कृष्ण बस्नेत । बस्नेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाह्रबिसे नगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार थिए । उनी एमालेका उम्मेदवार निमफुञ्जो शेर्पासँग हारेका हुन् । अहिले उनी त्यहि हारको बदला लिन अनेक प्रपञ्च गरिरहेका छन् । यो बेला सक्नेले नसक्नेलाई सहयोग गर्नै हो । यो मानवीय धर्म र कर्तव्य पनि हो । तर त्यसलाई कुनै राजनीतिक हिसाब किताबसँग मिलान गर्नु चाहिँ महा पाप नै हो । राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न बस्नेत यो हदसम्म गिर्छन् भन्ने सायदै कमले आंकलन गरेका थिए होलान् ।
शनिबार उनले एउटा अनौठो नाटक प्रदर्शन गरे । केहि मिडियाकर्मी उनै बस्नेतको पछि लागे । उनको नाटकको भिडियो खिचे । सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरे । केहि अनलाई र पत्रिकामा जर्बजस्त समाचार छपाए । नगरपालिकाले कोरोना भाईरसको नियन्त्रणका लागि कुनै सिन्को नभाँचेको झै बनाए ।
बस्नेतले रचेको नाटक
बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नम्बर ३ का आईतमान तामाङको १७ गते स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखियो । स्वास्थ्य सामान्य भएकाले होम आईसोलेसनमै बस्नुभयो । स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा । स्वास्थ्यकर्मीले तामाङलाई घरैमा गएर होम आईसोलेसन किट समेत दिएका थिए । तामाङको बेला बेला फोन मार्फत स्वास्थ्यको जानकारी स्वास्थ्यकर्मीले नै लिईरहेका थिए । शनिबार अरू बेलाको भन्दा तामाङको स्वास्थ्य अलिक च्यापेको जस्तो भयो । श्रीमतीले बस्नेतलाई फोन गरिन् । यदि राजनीति गर्नु थिएन भने बस्नेतले वडाका स्वास्थ्यकर्मी, नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका चिकित्सकलाई खबर गर्न सक्थे । तर उनले त्यो गरेन् । आईतमानको स्वास्थ्यलाई उनले राजनिती गर्ने हरियार बनाए ।
बस्नेतले आफ्नो बा १३ च ७८७५ नम्बरको स्करपियो गाडी समस्या परेका ब्यक्तिलाई अस्पतालसम्म नि:शल्क ब्यवस्था गरेका छन् । उनले गाडीमा चालक पनि आफ्नै खर्चमा राखेका छन् । यो बाह्रबिसे नगरबासीका लागि राम्रो कुरा हो । तर उनको हर्कत भने बिल्कुलै गलत थियो र छ । उनकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भने हालसम्म उनको गाडीले ३३ जनालाई सेवा दिईसकेको छ । शनिबार उनको गाडी चालक घर गएका थिए । बिरामीको फोन आईहाल्यो । चालकलाई पर्कने कुरा पनि भएन । बस्नेत आफै गाडी लिएर पुगे आईतमानको घरमा । बस्नेतलाई आईतमान कोरोना सं क्रमित हुन भन्ने समेत जानकारी रहेनछ । आईतमानलाई गाडीमा हालेर सिधै बाह्रबिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्याए ।
चिकित्सकहरूले आईतमानको अवस्था बुझे । उनी सं क्रमित भएको बताएपछि बस्नेत तीन छक परे । स्वास्थ्यकर्मीले सम्झे बस्नेत आईतमानका आफन्त हुन् । सं क्रमितको फोक्सोमा समस्या छ कि भनेर एक्सरे गर्ने ठाउँमा लैजान स्वास्थ्यकर्मीले बस्नेतलाई आग्रह गरे । तर उनले त्यहि बेला आफ्नो असली रूप देखाउन सुरू गरिहाले । बस्नेतले ह्वील चियरमा रहेका आईतमानलाई एक्सरे गर्ने ठाउँमा लैजान ठाडै इन्कार गरे । बरू केहि पत्रकारलाई बोलाएर उपचारमा सक्रिय स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको हुर्मत लिने काम गरे । उनले जुन काम गरे त्यो हदसम्म गिरेर राजनीति गर्नुको अर्थ के ?
उनले आईतमानलाई उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म ल्याउन गरेको सहयोग पक्कै पनि सर्हानिय नै छ । तर जब आईतमान कोरोना सं क्रमित भएको कुरा थाहा पाएपछि जुन गतिविधि बस्नेतले गरे त्यो कुनै पनि हिसाबले स्वीकार सकिने कुरा हुँदैन । बस्नेत बिरामीको एक्सरे नगराएर, त्यसै छोडेर भिडियो खिच्न तिर लागे । बस्नेतले बाह्रबिसे नगरपालिकामा यो संकटको बेला जुन नाटक मञ्चन गरे । उनका पार्टीलाई त प्रिय नै लाग्ला । तर सामान्य राजनीतिमा चासो राख्नेलाई भने मुख छोपेर हिँड्नु पर्ने बनाए । उनैले पत्रकारलाई दुरूपयोग गरेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका महिला चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी बस्ने आवासको ड्रोनबाट भिडियो समेत खिच्न लगाए । राजनीति गर्न यतिसम्म गिर्नु पर्छ ?
बस्नेतको यो हर्कत २४ सै घण्टा सेवामा घटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु आजित बनेका छन् ।
आईतमान कोरोना सं क्रमित भने पछि नजिक बस्न समेत डराएका बस्नेत स्वास्थ्यकर्मी माथि नचाहिँदो लाञ्छना लगाउन समेत भ्याए । नगरप्रमुख निमफुञ्जो शेर्पाले आ पराधिक मनस्थितिका साथ स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ड्रोन उठाएको बताउनुभयो । ईलाका प्र हरी कार्यालय बाह्रबिसेका प्रमुख सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुग्नुभएका नगरप्रमुख शेर्पाले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हतोत्साहित नभई आफ्नो नियमित काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । सरोकार टिभीका पत्रकार बताउने रामचन्द्र बस्नेतले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ड्रोन उडाएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । नगरप्रमुख शेर्पाले बिना अनुमति ड्रोन उडाएर भिडियो खिच्न नपाउने भन्दै कानुन बमोजिम का रबाहि गर्न माग समेत गर्नुभयो ।’कोरोनाको यस्तो म हामारीका बेला स्वास्थ्य उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी माथि गरिएको अमानवीय ब्यवहार सहन योग्य छैन, यस्ता आ पराधिक मनोवृत्ति भएकालाई का रबाहिको दायरामा ल्याएर छोड्छौ, नगरप्रमुख शेर्पाले भन्नुभयो ।’
भुम्लु गाउँपालिकाका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा बर्खे बिरूवा
मण्डदेउपुर नगरपालिकाले गैससलाई भन्यो 'जेठ मसान्तभित्र कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नु'